Avy amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy Style - Shina Nosoratan'i Style Factory
0,2 Oz Oz tavoahangy boribory PET misy tendany 32-400
0.2oz tavoahangy vita amin'ny vera vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny volamena, tavoahangy fanaovana tarehy vita amin'ny vakana, fitoeram-bokatra volamena. Sombin-tavoahangy famerana fihenan-tsasatra mahasoa sy azo ampiharina, kojakoja fikolokoloana isan'andro, manamora ny fivezivezenao, mitazona sary kanto foana. Torohevitra mafana: Azafady aza fonosina ny hafanana avo sy ny fitaovana PH avo. Mampiasà rano mafana rehefa manadio, aza mampiasa rano mafana hisorohana ny fiovana amin'ny hafanana be. tavoahangy fanosotra volo fanosotra tarehy naseho tombo-kase dia tena tsara, mahasalama, azo antoka fa tsy mitete. Kely sy mora entinao ianao, ampiasaina amin'ny hoditra vita amin'ny fonosana vita amin'ny fonosana vita amin'ny volamena, mora ampiasaina. Ntibacterial fitaovana, fiarovana sy tontolo iainana namana, marefo sy kely, mitondra amin'ny fotoana rehetra. Ntainer vita amin'ny PS Polystyrene, fonony vita amin'ny PP Polypropylene.
Tavoahangy heksagon PET misy oz 10 oz misy famaranana vozona 28-400
Ny tavoahangin-tsavony savony 10oz / 300ml dia vita amin'ny fitaovana PET ho an'ny mangarahara sy famaranana tsara kokoa. Ny fitoeran-tsavony savony dia endrika hexagonal boribory, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. Ny soroka 28/400 dia azo ampiarahina amin'ny paompy famafazana, paompy mibontsina, izay mety kokoa entina sy ampiasaina. Azo ampiasaina amin'ny lakozia fanadiovana, fanadiovana rano amin'ny zavamaniry, fonosana vokatra fikarakarana volo, sns. tavoahangy plastika ho an'ny savony ranon-javatra
1.7 oz natiora HDPE tavoahangy fanasana boribory vita amin'ny vozona 18-410
Product Detail Ny tavoahangin-bolantsika 2 oz / 60ml dia vita amin'ny fitaovana PP ho plastika tsara kokoa sy vita. Ny vatan'ny tavoahangy dia boribory, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy fiasa fampisehoana talantalana. Ny soroka 34/400 dia azo omena baolina mora entina ary ampiasaina.Can azo ampiasaina amin'ny deodorant amin'ny vatana, fonosana vokatra fikolokoloana volo, sns Fampiharana Mety tsara ho an'ny fampiharana sy tsena isan-karazany ny fitoeran-javatra, ao anatin'izany ny: Liquid Cleaner fivarotana mpanety volo fikolokoloana volo karazan-drano rehetra aqua Ho an'ny sustabil ...
Tavoahangy heksagon PET 2 oz mazava miaraka amina havoana 24-410
Product Detail Ny tavoahangin-tsika 2oz / 60ml dia vita amin'ny fitaovana PET ho an'ny boribory tsara kokoa. Ny tavoahangy dia endrika hexagonal boribory, manome anao traikefa tsaratsara kokoa sy ny vokatra fampisehoana talantalana. Ny soroka 24/410 dia azo ampiasaina amin'ny paompy spray, foam. paompy, izay mety kokoa entina sy ampiasaina. Azo ampiasaina amin'ny fanadiovana ao an-dakozia, fanadiovana zavamaniry, fonosana vokatra fikarakarana volo, sns. Fampiharana Mety tsara ho an'ny fampiharana sy tsena isan-karazany ny fitoeran-drano, ao anatin'izany ny: Liquid Cleane ...
8,5 oz plastika mainty lava vita amin'ny plastika vita amin'ny vozona 20-400
Product Detail Ny tavoahangy plastika lava misy plastika 8,5 oz dia fonosana plastika ho an'ny zavatra misy rano. Ny firafitry ny hatoka lava, ny tavoahangy vatan'ny tavoahangy dia afaka misoroka tsara ny jiro mivantana ao anaty tavoahangin-dronono. ny tavoahangy dia fisaka, izay miantoka ny vokatra fanontana tsara, mba hahafahanao manonta ny sary famantarana ny vokatrao hanehoana ny marikao.Izany dia azo ampiasaina amin'ny fonosana ranoka, solika, sns Fampiharana Mety tsara ho an'ny isan-karazany ny fitoeran-javatra. ..